[တရားဝင်] သင်၏လုပ်ငန်းများအတွက်အရစ်ကျ dr.fone - တရားဝင်အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ် dr.fone
အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ဖောက်သည်လိုအပ်ပါတယ်, ဒေတာလွှဲပြောင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, cleanup သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်, dr.fone သင်ထိပ်တန်းအဆင့် software ကိုသူတို့နှင့်အတူကျေနပ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်း Carriers & လက်လီကုမ္ပဏီများ & ပြုပြင်ခြင်းများအတွက် | အိုင်တီ / လုပ်ငန်း & နောက်ထပ်များအတွက် | Reseller များအတွက် | အရင်းအမြစ်
dr.fone - iOS ကိုအပြည့်အဝ Suite dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Data Recovery dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac အတွက်) - iOS ကိုအပြည့်အဝ Suite dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac အတွက်) - iOS ကို Data Recovery dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac အတွက်) - iOS ကို System ကို Recovery ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်အပြည့်အဝ Suite dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac အတွက်) - သည် Android Data Recovery MobileTrans Mac အတွက် MobileTrans
1 ကို PC ပေါ်မှာ 6-10 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 11-15 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 16-20 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 21-50 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 51-100 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 101-150 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ 151-200 မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 1 ကို PC ပေါ်မှာ Unlimited မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်
dr.fone - iOS ကိုအပြည့်အဝ Suite
• 6-10 ဖုန်းများအတွက်, 1 ကို PC
ပိုလိုပါသလား? တစ်ဦး Query Submit
အားလုံးအရွယ်အစား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့အ top-အဆင့်မိုဘိုင်း Solutions
Supported 6000+ ဖုန်းများအတွက်
လိုအပ်သော0Tech မှကျွမ်းကျင်မှု
သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင် / ကုမ္ပဏီအတွက်လူတိုင်းမျှချွေးကကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Query Submit
Wondershare Mobile က Solutions အပေါ်ကို run 500,000 ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မိုဘိုင်းလက်လီကုမ္ပဏီများ Wondershare အသုံးပြုခြင်းနေ7အကြောင်းရင်းများ
ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့်ဒေါ်လိုရေစ်, amet consectetur adipiscing Elite ထိုင်။ performance သောက်စံပယ် et ။ မိုက်ခရိုဝေ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မုန်လာဥငွေကြေးအလေးပေး့ကျေးဇူးပြုပြီးဆွဲထုတ်
တစ်ဦးက VERSION စိတ်ကြိုက်ပုံ
Wondershare software ကိုအတော်လေးခြားနားနှင့်ငါ၏ကုမ္ပဏီကစိတ်ကြိုက်ဗားရှင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်စျေးကြီးင်လျှင်သိရန်အလိုရှိ၏။
Wondershare စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ '' လိုအပ်ချက်အပေါငျးတို့သအရွယ်အစားကိုက်ညီကြောင်းတတ်နိုင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကျွန်တော်တစ်ဦး Win-Win စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအာမခံထားသော Wondershare မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်ပေးဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငွေပေးချေမှုပုံစံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။
ငါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်၏။ ငါ့တိုင်းပြည်အတွက်အတော်လေးတွေအများကြီးဖုန်းများအင်္ဂါရပ်ဖုန်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Wondershare မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာလွှဲပြောင်းအဆိုပါစမတ်ဖုန်းများဖို့အင်္ဂါရပ်ဖုန်းများအနေဖြင့်ဒေတာများလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသလား? ထိုသို့ဆက်သွယ်ရေးကထုတ်လုပ်အထူး devices တွေကိုထောက်ပံ့သလဲ
Wondershare မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက် 6000+ ကိရိယာစျေးကွက်တွင်အကြီးဆုံးမော်ဒယ်များထောက်ခံပါတယ်, အစဉ်မပြတ်ပိုပြီးအသစ်များကို & ပူ devices တွေကိုဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်း OS နဲ့ devices များမော်ဒယ်များခြေရာခံစောင့်ရှောက်နေကြသည်။
ပုံ MAINTENANCE မူဝါဒအကြောင်း?
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတွက် Wondershare မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒကသိရန်လိုသည်။
ဖြေရှင်းနည်းကဖုံးလွှမ်းသောအခါ Wondershare မိုဘိုင်းဖြေရှင်းချက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဘာဂ်နှင့်မွမ်းမံမှုများ (Software များပရိုဂရမ် updates, ပြင်ဆင်ခြင်းများ, လုံခြုံရေးသတိပေးချက်များ, ဝေဖန် patch ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများ, script များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်, ယေဘုယျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွှတ်ပေးနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနောက်ဆုံးသတင်းများ) အပါအဝင်မိတ်ဖက်များအတွက်ရရှိနိုင်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးဆော့ဝဲကို Maintenance ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့်ပံ့ပိုးမှုကာလအောက်မှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မတူညီသောဒေသနှင့်ခေတ်မီရေးမူဝါဒသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏တောင်းဆိုချက်ကိုအညီ, ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ထောက်ခံမှုများအသေးစိတ်ကိုအပေါ်ညှိနှိုင်းပါတယ်။
အဆိုပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်နမူနာများ၏အသေးစိတ် Wondershare စီးပွားရေးရောင်းရန်ဦးစီးဌာနဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်